Cigiyigii Waa ka Baryey Ninkii Cunay Baa ka Liita! – Rasaasa News
Jun 11, 2018 ethiopia, Ogaden, ONLF
London – June 12, 2018 – War hor dhac oo an ka helay xubno ka tirsan ururka ONLF, waxay xaqiijinayaan in muddo dheer ka dib gudoomiye Maxamed Cumar Cismaan uu dalbaday casilaad.
Lamo oga sababta keentay xiligan in uu iskiis casilaad u dalbado gudoomiyuhu. Maxamed Cumar Cismaan waxaa gudoomiyaha ONLF loo doortay sanadkii 1998, wixii xiligaa ka dambeeyey lamo qaban wax doorasha ah. Shuruucda uu ururku ku dhisananyahay ayaa waxaa ka mid ahaa in afartiisanaba laqabto shirwaynaha ururka si loo doorto gudoomiye.
Khilaaf ka dhashay sharciga doorasha ee ururka ONLF, wuxuu sababtay in ururku kala jabo xubno muhiim ah oo ururka ka tirsanaana arintaa darteed ay ku dhintaan.
Dhawaan ayey ahayd kolkii xabsiga laga siidaayey Bashiir Axmed Makhtal oo uu adeer u yahay gudoomiye Maxamed Cumar Cismaah. Bashiir ayaa muddo 12 sano ah ku xidhnaa dalka Itoobiya, ka dib kolkii ay dawlada Itoobiya ku eedaysay in uu yahay xubin ka tirsan golaha dhexe ONLF.
Ururka ONLF, waxaa la aas aasay August 15, 1984, waxaana uu markii ugu horaysay dagaal hubaysan ka bilaabay Ogadenia sanadkii 1994, ka dib kolkii ay dawlada Itoobiya ka baxday heshiis u dhaxeeyey ONLF kuna khasabta ONLF in ay duur gasho.
Sanadkii 2009, ayey dawlada Itoobiya oo kaashanaysa maleeshiya Liyu Police-ka guluf colaadeed ku qaaday ururka ONLF, waxayna dishay Dr. Mohamed Siraad Dolal oo aha xubnihii u ahaa ururka ONLF. Intii xiligaa ka dambaysay ururka ONLF, waxaa soo foodsaaray dhibaato ciidan iyo mid sumcadeed, waxayna awoodiisii ciidan iyo midii taageeroba ka dhamaatay guud ahaan gayiga Ogadenia.
Waxaa jiray wadahadalo nabadeed oo dhawr goor ka dhacay Nairobi, kuwaas oo ay soo abaabuleen xubno Somali ah oo ka tirsan dawlada Kenya, laakiin aan wax madhaxa ah laga gaadhin.
Wadahadalkii ugu dambeeyey ONLF waa lagu mardabeeyey, kaas oo u keentay sumcad xumo, ka dib kolkii ay horfadhiisteen saraakiil Tigree ah iyo waliba madaxa Kilalka Soomaalida.
Sida ay sheegeen xubnaha ururka ONLF, waxaa shir lagu qaban doonaa magaalada Caasmara ee dalka Eriteriya bisha June 29, 2018, halkaas oo sida la sheegay Cabdiraxman Maadey lagu badali doono Maxamed Cumar Cismaan.
Cabdiraxman Maadey, waa nin da,ah, waana nin aqoonyahan ah, in badan ku soo dhaxjiray siyaasada ururka ONLF, wuxuuna ku fashilmay in uu raaco shuruucda ururka. Waxaana iswaydiin leh, waxa uu soo biirin karo hadii uu badalo Maxamed Cumar Cismaan.
Dalka Eriteriya iyo Itoobiya waxaa u dhaxaysay colaad xoog leh, waxay saldhig u yahay Eriteriya ururada Mucaaradka ah ee Itoobiya. Isbadalka siyaasadeed ee ka dhacay Itoobiya ayaa Itoobiya ugu baaqay nabad shuruud la,aan iyo in ay fulinayso dawlada Itoobiya heshiiskii Aljeris.
Dhinaca kale, qalalaaso siyaasadeed ayaa waxaa uu ka jira dagaanka Soomaalida Itoobiya, waxaan iswaydiin u baahan in wax la iska waydiiyey sida ay isugu soo beegmeen arimahan siyaasdeed ee is-huwan oo ay aabe u tahay Itoobiya.
Barbaarta Gabalka ka Dhacay Magaalada Shiniile